Part 1. 20 Best ugwo Android Games
Part 2. 10 Best Free ugwo Android Games
Ugwo Android Games
Games bụ otu n'ime ndị na-eme nke nkọ na freshen uche nke ndị mmadụ. Ndị a nwere ike na-akpọ ka uche Nkọ eme. Ugwo Android egwuregwu na-egwuregwu ndị ahụ nke na-egwuri mgbe-akwụ ofu ego. Ha bụ ndị egwu na elu àgwà ndịna-emeputa na captivate a ọkpụkpọ ka amaba n'ime egwuregwu. Ha bụ otu n'ime ihe ndị kasị ukwuu na-egwuri egwu na play ụlọ ahịa na magburu onwe Google ranking na evaluates. Ha nwere otu onye nke na-eduga netwọk gburugburu ụwa na ike ọnụ ọgụgụ nke downloads. Ha nwere karịa ọnụ ọgụgụ nke etoju na mgbagwoju anya errands. Na nkenke, ugwo egwuregwu ndị kasị mma-ere egwuregwu ke ụwa dum.
1. Oge a na mbuso 5
Oge a na mbuso 5 bụ otu n'ime n'elu ugwo android egwuregwu. Ọ bụ otu nke Kacha iteration nke onye mbụ shooter usoro nke Oge a na mbuso. Ọ na-egosi nnọọ elu-edu ndịna-emeputa, na-atọ ọchị egwuregwu play, na-akara multi-ọkpụkpọ, na otu ọkpụkpọ mkpọsa. E nwere otutu nke ọdịnaya ebe a na-enwe na mmepe na nso nso-arahụ n'ihu ma mere ihe egwuregwu a free aha.
Nova usoro bụ otu nke kasị mma ugwo android egwuregwu. Usoro isiokwu a egwuregwu ọzọ bụ akpa onye shooter na ịkpa ọzọ na-akpali akpali rudiments. Na-eche echiche nke ya dị ka Halo ka Oge a na mbuso oku nke ọrụ site tụnyere. Egwuregwu a nwere Ukwu ndịna-emeputa, na-akara multi-ọkpụkpọ ụdịdị, a 10-ozi mkpọsa mode, na ndị ọzọ. Akụkọ bụ n'ezie na-adọrọ mmasị ezigbo na na-akara multi-ọkpụkpọ ọkụ nwere ike ruo 12 egwuregwu na asaa iche iche matchmaking egwuregwu ụdị.
3. tanya Nchekwa onwe
Ahịa: $ 4
GTA bụ ihe kasị mma na-akwụ ụgwọ android egwuregwu. Ọ bụ tupu mastered, elu-mkpebi ndịna-emeputa wuru n'ụzọ doro anya maka mobile agụta ọkụ enrichments, ihe enriched agba palette na mma agwa ụdị. Dual analogue mkpisi njikwa maka zuru igwefoto na ije akara. Ọ na-ike na-akpali mmasị tactile mmetụta.
Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị enwe mmasị n'ebe na kasị mma egwuregwu. Ị bụ naanị otu nzọụkwụ n'ebe ụwa nke eju.
Limbo see ọnọdụ ochichi mgbe ọ bụ na n'oge 2015 na ọ bụ site ugbu a, otu n'ime ihe ndị kasị mmasị na gbaa asịrị banyere egwuregwu nke afọ. Anyị egwu dị ka nwa ewu na-achọ nwanne anyị nwaanyị na-emenye ụjọ, dull ụwa nke Limbo. Ndabere nwa ọcha na imewe hysterics na ambiance flawlessly na nke a bụ n'ụzọ dị mfe otu nke kasị mma e mere egwuregwu nke 2015. The akụkọ bụ mepere anya na egwuregwu play technicalities bụ siri ike.
Machinarium bụ otu n'ime ndị mbụ n'ezie Ukwu mgbaghoju anya egwuregwu. Ọ na-egosiputa a obere robot na ị jikwaa na ị ga-akpali banyere gị gburugburu ebe obibi na-achọta ihe na iji ha na-edozi egwuregwu mgbagwoju anya. Ọ na-e-eji mastered ebe ya mbido ntọhapụ na-agụnye Google Play Games ọrụ na enwekwukwa ndịna.
6. Ncheta Valley
Ncheta Ndagwurugwu bụ a masterpiece. Ọ utilizes luminously e egwuregwu mgbagwoju anya na ahu nagide geometric delusions na ị ga-edozi-esi na-esonụ larịị. Ụzọ ndị a na-etoju ikunye, ighikota, itulielu, ma ebido ịgụnye ike ọhụrụ ndị a shapes bụ n'ezie ihe ị na-ahụ na-enwe n'ezie ekele maka. Na-eme ka Ncheta Valley otu n'ime ndị ga-enwe Android egwuregwu. E nwekwara a ụdị akụkọ akara banyere a Princess na a na-adịghị ndụ ụwa. Ọ bụghị ókè miri emi ma ọ na-eje ozi ya bu n'uche iji ụgbọala egwuregwu n'ihu. Ọ bụ ọtụtụ ụtọ, na e weere site na ọtụtụ na-otu nke kasị mma egwuregwu.
7. Alaeze Rush (3 egwuregwu)
Alaeze Rush bụ a budding egwuregwu franchise na ndị mmadụ nwere n'ezie jidere a jide. Ọ bụ ụlọ elu agbachitere egwuregwu na otu onye nke kacha gosiri, kasị amasị ndị si n'ebe. E nwere atọ egwuregwu ke nsonso gụnyere Alaeze Rush, Alaeze rosh n'ókèala, na Alaeze rosh Origins. All atọ iji fọrọ nke nta otu technicalities ebe ha niile na-ulo-elu-agbachitere egwuregwu. Ha na-amalite dị mfe ma na-esi ike karị dị ka ị na-enwe ọganihu.
Ha Njirimara ezigbo ndịna-emeputa, ezi akomako, na na banyere dị ka njikọ dị ka ị pụrụ ga-esi a ọkachamara Final Fantasy Ụzọ e si eme ọzọ na gam akporo. The egwuregwu bụ nnọọ oké ọnụ nke nwere ike ịchụ ụfọdụ ndị pụọ, kama n'okpuru bụ egwuregwu ndị na-enwe ihe doro anya uru mgbe ọ na-abịa omimi na ịkọ akụkọ.
9. ise ehihie na abalị Freddy si 1, 2, na nke 3
Ahịa: $2.99 ọ bụla
The ise ehihie na abalị Freddy si trilogy bụ egwu egwuregwu na-adabere ujo ka Ụjọ na jeans anya nke gị. N'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ, ọ na-arụ ọrụ ma na nkwekọrịta bụ maa n'etiti creepiest egwuregwu si n'ebe. Mbụ na nke abụọ e mere ka ọha na 2014 na Kacha ọhụrụ iteration tọhapụrụ na 2015. All atọ itunanya ikenyeneke mbiet Google Play Echekwala Fim, na-enwe mfe egwuregwu play arụzi ụgbọala.
A magburu onwe free Android egwuregwu nwere ezi uche 3D atụmatụ. Egwuregwu a ọnọde anọ glam Slam tournaments.
11. nwayọọ nwayọọ amịkọrọ HD
Osmos HD bụ ihe karịrị egwuregwu. Mgbe ị na dị nnọọ anya na ya, ị na-ahụ ị na-emeso na obere mote na-aghaghị banye nta motes na-atụgharị si-ibu na, si otú, inu elu ibu motes. Na eziokwu, a Wezuga tricky ụbụrụ ilu bụ ma pụtara na obi ụtọ. Na ambient music na mkpumkpu ọsọ egwuregwu play, ị nwere ike n'ụzọ ziri ezi ahu nagide otu awa na ihe kpọmkwem larịị n'ihu gị kụọ ya na-enwe ọ bụla pụtara obere nnụnụ mee nke ya. Ọ bụ a n'ezie na-enweghị atụ Ịgba Cha Cha ahụmahụ onye ị na-ekwesịghị ileghara.
12. si n'ebe
Si n'ebe bụ ngwakọ nke a lanarị egwuregwu na a SIM egwuregwu. Ọ na-ewetara ya ụfọdụ dị exigent egwuregwu play, Google egwu egwuregwu rụzuru, atọ dị iche iche endings, na a n'ezie pụrụ iche na fun n'ala. Ị na-egwu dị ka ihe astroloji onye rouses si cryonics ebe ukwuu na ịdị ukwuu nke ohere. Ị ga-atachi obi, na-gị oxygen osisi ike elu, na ikwu ụzọ gị ụgbọ mmiri mgbe emeso ndị ọbịa na-adịghị ekwu okwu dị ka ị na-ekwu ma ị ga-emesị mụta ikwu okwu dị ka ha na-eme. Ọ bụ na-atọ ọchị, tricky, na egwuregwu na Aga na-ị na-arụsi ọrụ ike maka mgbe.
Riptide GP2 bụ otu n'ime ndị mbụ nnukwu releases esonụ Google Play Games ọrụ ntọhapụ. Dị ka ndị dị otú ahụ o nwere attainments, na-akara multi-ọkpụkpọ, na ígwé ojii na-azọpụta. Oputakwara na-otu nke kasị mma racing Android egwuregwu. Ọ bụ achọ, o nwere Ukwu ndịna-emeputa, na ọ bụ a pụtara inimitable echiche maka a racing egwuregwu.
14. The ime ụlọ 1 na nke 2
Ahịa: $2.99 karị
The ime ụlọ 1 na nke 2 bụ di na nwunye nke mgbaghoju anya egwuregwu na-enye a pụrụ iche ahụmahụ. Kasị akpọkwa na kasị ụlọ na-egwuregwu mgbagwoju anya n'ime egwuregwu mgbagwoju anya na mgbe ahụ e nwere egwuregwu mgbagwoju anya n'ime ndị. The pụta bụ a fun oke bekee onu nke egwuregwu mgbagwoju anya na gamers nwere ike mfe na-amali elu n'ime.
15. Shadowrun alaghachi ma Shadowrun Dragonfall
Ahịa: $2.99 na $ 6.99
Ọ na atụmatụ atụmatụ RPG ịke egwuregwu arụzi na nwere ike ma na-eme achọ a bit nke a mmụta usoro. Egwuregwu fọrọ nke nta flawlessly merges elu ọchịchọ (elves, wdg) ọcha na uzuoku Punk ọcha ike a n'ụzọ ziri ezi ahụkebe ikuku. Ma ndị a na utu aha bụ ga na-egwuri.
16. Star Wars: Knights nke Old Republic
Star Wars: Knights nke Old Republic (KOTOR) bụ egwuregwu na were ụwa site oké mgbe ya na nke mbụ tọhapụrụ karịrị 10 afọ gara aga. Ọ kwere ka ị na-nka okwu na-emetụta ndị upshot nke egwuregwu na-ka ị na-egwu otú ị chọrọ nke bụ ka a ọhụrụ nghọta n'oge ahụ. O nyeere amalite a nwayọọ na prolongs taa.
Terraria bụ a top ugwo android egwuregwu. Ọ na-ebe Itie dị ka 2D uehal nka na ụfọdụ na nke ahụ bụ eziokwu. Ị egwupụtakwa maka ego, nka, ihe na-egbu ihe dị ka uehal nka na e nwere ihe ọbụna obodo multi-ọkpụkpọ na ma utu aha. Otú ọ dị, Terraria na-agụnye onyeisi ịlụ ọgụ na ụfọdụ ndị ọzọ amara atụmatụ.
18. Ụwa nke goo
Ụwa nke goo bụ otu nke kasị mma mgbaghoju anya egwuregwu. Na egwuregwu a ị ga-ewu a Ọdịdị na-eru a anwụrụ inu tụtụkọta goo. Iji nweta kacha scores, i kwesịrị iji dị ka obere Nkea ka ekwe omume otú anwụrụ eme nzuzu elu dịcha goo. Ọ bụ fun na n'ụzọ zuru ezu chere akpali.
19. XCOM: Iro N'ime
XCOM: Iro N'ime bụ atụmatụ egwuregwu ahụ bụ ported ka Android si PC. Ọ na-egosiputa ndịna-emeputa na dị nnọọ ukwuu karịa nkezi maka mobile nakwa dị ka a ogologo otu ọkpụkpọ mkpọsa nke nwere ị na-alụ ọgụ anya ọbịa mbuso agha iji cheesi ịke atụmatụ na-arụzi ụgbọala. E nwekwara na-akara multi-ọkpụkpọ, a otutu ngwá na ngwá agha Ọkwa ruo enyere gị aka gị ozi, na ọ bụ n'ezie dị nnọọ onye na mkpokọta oké etu esi.
20. Baldur n'ọnụ ụzọ ámá, Baldur n'ọnụ ụzọ ámá II, na Icewind Dale
Ahịa: $9.99 ọ bụla
M grouped atọ ndị a egwuregwu ọnụ n'ihi na ha niile nọ tọhapụrụ site n'otu Mmepụta (Beamdog). Ha Njirimara nnọọ ogologo akụkọ na mgbagwoju egwuregwu play na na-n'aka na-ị na-arụsi ọrụ ike maka ọnwa n'elu ọnwa.
E nwere ụfọdụ n'ime ndị na-enweghị ike imeli ezi àgwà egwuregwu na elu ahịa. Ma ị na-adịghị na-echegbu onwe mgbe niile n'ihi na anyị na-ewetara gị dị otú ahụ na-akpali akpali kasị mma free ugwo Android egwuregwu nke ga-belata gị ibu arọ nke na-akwụ ụgwọ ego.
1. Dungeon dinta 3 Nwere Obi Ike Ọnwụnwa
Dungeon dinta 3 Nwere Obi Ike ikpe na-akwụ ụgwọ egwuregwu n'ihi na free android. Ọgụ gafee akụkụ dị ka ị iru kwụsịrị agha nke ajọ omume na ezigbo oge Anime erigbu. Dum ihuenyo bụ nke gị na-achọpụta dị ka ị mmeko si ike n'ezi na pụtara nkà. Players Ahụmahụ agha dị ka mgbe n'ihu na ngwa na-erigbu, mara mma mmetụta, na ihuenyo-n'ikwe ndịna-emeputa, na-egbu egbu finishers. Nwalee nkà gị megide World onyeisi, na Party Ọnwụnwa, na Wayfarer si War, n'ala, na ọtụtụ ndị ọzọ ụtọ, na-frenzied ụzọ na-egwu.
New Star Soccer bụ a usoro nke football video egwuregwu bipụtara New Star Games, nke na-enye ohere ọkpụkpọ nka ma jikwaa ọhụrụ football ọkpụkpọ ka ọ budges site n'ohu nke leagues na mba squads.
3. Brothers na ogwe aka 3
Ụmụnna nọ na ogwe aka 3: Ụmụ nke Agha ebupụta squads nke nwere ike kwalite ma ọ bụ na-ekpu. The customization maka egwuregwu a e ogologo. The ọkpụkpọ nwere ike gbanwee ma melite ya / ya ngwá agha mee ka ụzọ ha si egwuregwu play. Ntụkwasị ngwá dị ka agha rifles, rọketi launchers, obere égbè sniper rifles, shotguns na knives nwere ike zụta si ahịa. The ọkpụkpọ agwa nwere ike ugboro ịgbanwee gafee larịị na a Kechie usoro. Ndịna-emeputa ka enwekwukwa na Ọ na atụmatụ mma visuals. Egwuregwu na-atụmatụ n'akụkụ rụzuru na nke egwuregwu nwere ike na nkwupụta ụda elu nkà ha iji imezi ihe ogbunigwe. Ụfọdụ agha bụ ndị iro na-eji ihe mgbochi-ikuku pụrụ ịchọta n'oge n'akụkụ ọzọ.
4. Home Run Agha 3D
Home Run Agha 3D ịkpa gyroscope edinam nachi ka na-agbalị n'ime batter si igbe. Players Siwing ụsụ site na-eti na ihuenyo. Hit ohere na-adabere pụtara ìhè na saịtị, ọkpụkpọ Ike àgwà, na Player si Kpọtụrụ mma. Àgwà ndị a nwere ike gbanwere site na-agbanwe a agwa akụrụngwa.
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma free racing egwuregwu ebi. Nke a bụ egwuregwu ugbua ka enwere nke ọtụtụ narị ọhịa egwu na crazy ụwa jupụtara jụụ stunts na ton nke magburu onwe anyịnya igwe. Irite kpakpando ịchụ ọhụrụ etoju na mezue rụzuru na-egwu anyịnya igwe for free. A ole na ole nke anyị anyịnya igwe: acrobatic, uwe ojii, mọ, ibu, na àjà ihe ọṅụṅụ, Halloween, zombie, ninja, agha, hog, Santa, na ekele, ọtụtụ ndị ọzọ.
6. isii Naah: Gang showdown
Chọpụta ihe n'ụzọ ziri ezi oke na-emeghe Wild West n'ókè jupụtara cowboys, ndị ohi na ndị ọzọ ... na-ekwekọghị n'okike iro a atọ onye shooter akpali akpali egwuregwu. Na-na 40 arụmọrụ na na na nnukwu ihe di iche iche nke errands n'ihi na ị na trounce. Ị ga-ọsọ ịnyịnya, wepụ na-apụnara mmadụ; iru anya mmiri na ebili mmiri nke ndị iro na ndị ọzọ n'ụzọ.
7. Asphalt 8: Air ekesa
Ndị kasị mma Android ahịa racing egwuregwu usoro esịmde a ọhụrụ n'usoro n'usoro ebe. Mezue vibrant, elu na-agba airborne stunts na ókè ịnya ụgbọ ala nkà kwadoro site na a ika-ọhụrụ physics engine. E nwere 56 elu-arụmọrụ ụgbọala (80% nke ha NEW!) Na n'elu ikikere emepụta na ụdị dị ka Bugatti Veyron, Lamborghini Veneno, Pagani Zonda R na Ferrari FXX.
Dị ka otu ẹdude Commando nke a sabo agha megide a callous ọchịchị aka ike, na ị na-tọrọ atọ na frontline na hell-kpebisiri uru. Ị ga-eji niile nke gị kpọmkwem nkà aka ịtachi obi wakpo nke onye iro agha na-ata gị dara agha.
Gangstar Vegas a kasị ugwo free android egwuregwu. Egwuregwu a na-egwuri dị ka a gwara ọgwa karat fighter na a blockbuster akụkọ mode. Anyị ga-eme ka anyị na ụzọ site 80 arụmọrụ jupụtara agha. Mgbe ahụ, anyị nwere rụpụta a officer squad iweghara Vegas na-emeri mafia agha. Nke a bụ nnọọ mkpali egwuregwu jupụtara dị iche iche ọnwụnwa ga-arụzu.
10. Commando Imegwara
Ọ bụ otu n'ime n'elu ugwo free android egwuregwu. Egwuregwu a nwere mma 3D ndịna-emeputa. Ọ nwere ọkwa dị iche iche nke ezigbo agha. E nwere dị iche ngwá agha na egwuregwu a na-alụ ọgụ na onye iro.
> Resource> emulator> Best 20 New ugwo Android Games Ị ga na-agbalị